Kristu ndiwo Wanafanira kukubatsira Kubvisisa Zvirikuitika munyika.
"Chenjerani, kuti mureke kutapwa namunhu adachechenjera,nakupembziwa nazvanhando,achitewera tsika zawanhu nazvakuwamba kwanyika,asingateweri Kristu"(WaKorose 2:8).
Munhu aripache anamaonerhe ache anaita zvinhu.Nainzira ibodziyo, aripache anamaonerhe ache anaita nyika ino.Ana mabvisisiro ache anaita zvinhu zvirikuitika munyika.
Zvinhu zvinatipangiza nyika zvidawanda.Zvinhu izvi ndizvo zvako unafanira kungwarira.Wazhinji wanaona nyika mumanyunzipepa.Wanaemera kuuzgha nawanatapa nhau.Wanandozvibva namagumba.Waribe kumbopsaka kuiona mubhaibheri.Bhaibheri iri rinatidziwisa zvirikuitika munyika.Rinatiuza zvichaitika mangwana.Rinatiuzawo zvathu tinafanira kuitawo ifepano.
Munyika munamabandiko akusiyanasiyana.Aya mhabandiko azvakutongwa nakurongwa kwazinyika.Mabandiko aya ananzero zawo.Asi zina nzero zacho hazibudi pasoko raMwari.Zvino pana waKristu anatambirawo nzero izi.Mukristu adasununguka kuitawo bato rache.Asi haafairi kutora nzero zentse zentse.Anafanira kutambira nzero zapamweya.Bhaibheri rinataura nazvakutongwa nakurongwa kwazinyika.Asi wazhinji hawazvidziwiba.Wanafunga kuti haritauri nazvazvo.Ichocho ntsichadi ba.
Mwari wadatipa soko rawo.Soko iri ndiro rinatipangiza nzero zathu tinafanira nazo.Ndiro rinafanira kutikwewera.Ndiro rinafanira kutibatsira kubvisisa zvirikuitika munyika.Ndiro rinafanira kutipangiza chadi muzvinhu zventse.
Mwari wana maonerhe awo wanaita zvinhu.Maonerhe aya ndiwo ako unafanira kuitawo iwe.Soko rawo tchibveneko.Ndicho chibveneko chako unafanira kurarama macho chiri.Ndiko kuti tigare tichikunda.Ndiko kuti tibudirire pana zvathu tinaita. Ndiko kuti tigare tichifara.Tinadzararama nazira iyi munyika idanyangara kudari.Zviri mayo iri zvinanga zvisingachapusi kutivhiringiza.Tinanga tadi pamusoro pazvo.Hareruya!
Baba wanandida.Ndinakutendani.Munandibatsira kubvisisa zvirikuitika munyika.Munandipangiza nzero zakurarama nazo.Soko ranu ndicho chibveneko changu.Ndicho chibveneko change ndinararama macho chiri.Handivhiringwi nazvinhu zvanyika ino.Ndinagara ndiripamusoro pazvo.Nyika ino idanyangara zvayo.Asi ndinautano hwawanhu waMwari.Ndina chuma chizhinji.Ndinakunda zventse zvangu ndinasangananazvo.Ndinabudirira panazventse zvangu ndinaita.Mudzina raJesu. Ameni.